ဇော်ဂျီဖောင့်... နှင့် ယူနီကုတ် တို့ အသုံးဝင်ပုံ - ရတနာဝါသ ဘုရားကျောင်း 華緬 三寶寺
ဇော်ဂျီဖောင့်... နှင့် ယူနီကုတ် တို့ အသုံးဝင်ပုံ
Posted by ukkmaung on March 22, 2012 at 11:36pm
ဇော်ဂျီဖောင့်ကို ၀င်းဒိုးအသုံးပြုသူများအတွက် အခြေခံအားဖြင့် စနစ်၂ ခုရှိပါတယ်။
မိမိအသုံးပြုသော ၀င်းဒိုး ဟာ ၃၂ ဘစ် သို့မဟုတ် ၆၄ ဘစ် ဆိုသည်ကို မိမိတို့ ကိုယ်တိုင်သိရှိရမည်ဖြစ်ပါတယ်။
မိုင်ကွန်ပျူ အပေါ်တွင် ညာကလစ်ထောက်လိုက်ခြင်းဖြင့် properties ကို နှိပ်လိုက်ပါ။
ထိုကဲသို့ ပေါ်လာမည်။ လေးထောင့်ထဲမှ နေရာကို ကြည့်ပါ. ၃၂ သို့မဟုတ် ၆၄ ကို သင်မြင်တွေ့ရမည်။
ဤသို့နည်းဖြင့် သင်သိသောအခါ ဇော်ဂျီဖောင့်ကို စက်ထဲသို့ သွင်းရန် ဒေါင်းလုပ်ချပါ။
ဒီအပေါ်က hosting site တွေထဲက မိမိ နှစ်သက်သော ဆိုက်ကိုရွေးချယ်၍ Click Here ကို နှိပ်လိုက်ပါ။ သင့်စက်ထဲ ဒေါင်းလုပ်လုပ်နေမည်ဖြစ်သည်။
ဒေါင်းလုပ်လုပ်ဖို့ရန် သူက Save လုပ်မလား Run လုပ်မလားဆိုတဲ့ dialog box လေးတစ်ခု ပေါ်လာသောအခါ Save ခလုပ်လေးကို နှိပ်လိုက်ပါ။
ဒေါင်းလုပ်ပြီးသောအခါ သင့် အနေဖြင့် Run ပေးရမည်။ သို့မဟုတ် ဒေါင်းလုပ်ဖိုင်ကို Double Click ၂ ချက် နှိပ်လိုက်ပါ.. သင့်စက်ထဲတွင် ဇော်ဂျီဖောင့်စနစ်ကို တပ်ဆင်သွားပါလိမ့်မည်။
အထက်ပါ ဇော်ဂျီဖောင့်အမျိုးအစားသည် များသောအားဖြင့် ၀င်းဒိုး Vista and window7များအတွက် အထူးသင့်လျော်ပါသည်။
၀င်းဒိုး XP သို့မဟုတ် Linux Operation system နဲ့ Mac(Apple) အသုံးပြုသူများအတွက်
ဒီလင့်လေးမှာ (http://www.zawgyi.net/) တိုက်ရိုက်သွားရောက် ယူနိုင်ပါသည်။
Mobile Phone များအတွက်လည်း အောက်ပါအတိုင်းလုပ်ကြည့်ပါ
Download Type Fresh and AndExplorer App from Android Market
Type Fresh----http://www.mediafire.com/?fwjjg8wdoq6p3dp (download လုပ်ကြည့်ပါ)
AndExplorer----http://www.mediafire.com/?wtykwydmozn (download လုပ်ကြည့်ပါ)
Copy your your font file (e.g. Zawgyi.ttf) to your SDCard
Click on DroidSansFallback.ttf and choose your font file (Zawgyi.ttf) from your SDCard to swap the font
Click Android menu button and choose Apply Fonts and restart your Android device
မြန်မာ ယူ နီ ကုဒ် အသုံးပြု နည်း လမ်းညွှန်
ယခု မြန်မာ ယူ နီ ကုဒ် လမ်း ညွှန် လေး ဟာ end user တွေ အတွက် ဖြစ် ပါ တယ်။ ယခု လမ်း ညွှန် လေး ကို ဖတ် ပြီး ယူနီ ကုဒ် အသုံးပြု ဖို့အတွက် အထောက် ကူ ပြုတယ် ဆို ရင် ပဲ ကျေနပ် ပါ တယ်။ မြန်မာ ယူ နီ ကုဒ် စနစ် ဟာ နိုင်ငံ တကာISO အဖွဲ့ကြီး နှင့် ကမ္ဘာ့ ယူ နီ ကုဒ် အဖွဲ့ စည်း မှ စံ အြဖစ် သတ် မှတ် ပေး ထား ပြီး သား ကွန် ပြူတာ သုံး မြန်မာ စာ စနစ် ဖြစ်
ပါ တယ်။ ယခု အချိန် ၌ မြန်မာ ယူ နီ ကုဒ် စနစ် သည် တည် ငြိမ် နေ ပြီ ဖြစ် ကာ Windows, Mac နှင့် iPhone
တို့တွင် အဆင်ေပြေချာ မွေ့စွာ ဖတ် ရှုနိုင် ပြီ ဖြစ် ပါ တယ်။ နောင် တစ် ချိန် မှာ လည်း နိုင်ငံ တကာ အသိ မှတ် ပြုပြီး ကွန် ပြူ
တာ သုံး မြန်မာ စာ စနစ် ဖြစ် လို့မည် သည့် ဒေသ တိုင်း ပြည် ကို ရောက် ရှိ သည် ဖြစ် စေ မြန်မာ စာ နှင့် မြန်မာ လက်
ကွက် တွေ ဟာ ကွန် ပြူ တာ များ မှာ ပါရှိ လာ တော့ မှာ ဖြစ် ပါ တယ်။ သို့ ဖြစ် ၍ မြန်မာ ယူ နီ ကုဒ် ကို စတင် အသုံးပြုလို သူ
များ အတွက် ယူ နီ ကုဒ် စနစ် ကို ရင်းနှီး ကျွမ်းဝင် မှု ရှိ စေ ရန် ဤ လမ်း ညွှန် လေး က အသုံး တည့် လိမ့် မယ် လို့ မျှော် လင့်ပါ တယ်။
မြန်မာ ယူ နီ ကုဒ် ဖောင့် မျိူး ကွဲ များ
မြန်မာ ယူ နီ ကုဒ် ဆို တာ ကွန် ပြူတာ သုံး မြန်မာ စာ စနစ် ဖြစ် ပါ တယ်။ မြန်မာ ယူ နီ ကုဒ် စနစ် ကို အြေခ ခံ ပြီး အခ မဲ့ ထုတ်ဝေ ထား တဲ့ ဖောင့် မျိုး ကွဲ (ဒီ ဇိုင်း ကိုယ့် စိတ် ကြိုက် ပြင်ဆင် ထား မှု) တွေ ရှိ ကြ ပါ တယ်။ ဒါ ပေ မယ့် ထူးခြား ချက် က ယူ နီကုဒ် စနစ် ကို အြေခ ခံ တဲ့ ဖောင့် အမျိုး စား တစ် ခုခု ရှိ ယုံ နဲ့အခြား ယူ နီ ကုဒ် ကိုအခ ခံ သည့် မည် သည့် ဖောင့် နှင့်ရေးသား ထား သည် ဖြစ် စေ ကောင်းမွန် စွာ ဖတ်ရှု နိုင် တာ ပါ ပဲ။ လက် ရှိ အခ မဲ့ ပေး နေ တဲ့ ယူ နီ ကုဒ် စနစ် ကို လိုက်နာ တဲ့ အခ မဲ့ ဖောင့် တွေ ကေတာ့
(၁) မြန်မာ ၃ (Myanmar3)
(၂) ပုရပိုက် (Parabaik)
(၃) ပိတောက် (Padauk)
(၄) သံလွင် (Thanlwin)
(၅) ဝင်း ယူ နီ အင်း ဝ (Win Uni Innwa)
(၇) မိုင် မြန်မာ( MyMyanmar)
(၈) မာ စ တာ ပိစ် (Masterpiece) Mac အတွက် တို့ဖြစ် ကြ ပါ တယ်။
from : http://www.myanmarsar.info/myanmar-unicode-guide/
အထက်ပါ font များကို Font ဆိုတဲ့ Folder မှာ သွားရောက် ယူနိုင်ပါတယ်။
Windows တွင် Font သွင်းခြင်း
၁။ Fonts Folder ထဲက နှစ်သက်ရာ font တစ်ခုဖြစ်စေ အားလုံးဖြစ်စေ Copy ကူးပါ။ ( Right Click-> Copy or Ctrl + C)
၂။ C:\_Windows\_Font ကို သွားပါ။ Mouse Right Click နှိပ်ပြီး Paste လုပ်လိုက်ပါ။
သွင်းလိုသော font များကို select လုပ်ပြီး Right Click လုပ်ပါ။ ပြီးလျှင် Install ကိုနှီပ်ပြီး
သင်သည် Administrator Level ဖြစ်ရန်လိုအပ်သည်။ သာမာန် user account ဖြစ်ပါက paste
Fonts Folder မှ သွင်းလိုသော Font ကို Double Click နှိပ်လိုက်ပါ။ အောက်ပါ Install Font ကို
Font တစ်ခုထက် ပိုသွင်းလိုလျှင်
၁။ Home folder အောက်တွင် myfont ဆိုသည့် folder ဆောက်လိုက်ပါ။ ထို့နောက် ထည့်လိုသော font များကို ထည့်ထားလိုက်ပါ။
၂။ Terminal ကို ဖွင့်ပါ။
၃။ $ cd /user/local/share/fonts/truetype ကို ရိုက်က်ပြီး Enter နှိပ်ပါ။ ( အချို့ distro များသည် /
usr/share/fonts/truetype လမ်းကြောင်းဖြစ်သည် )
၄။ $ sudo mkdir myunicode လို့ ရိုက်လိုက်ပါ။ password တောင်းလျှင် ထည့်လိုက်ပါ။
၅။ $ sudo mv ~/myfont/* myunicode/* လို့ ရိုက်လိုက်ပါ။
၆။ $ fc-cache လို့ ရိုက်လိုက်ပါ။ ထိုအခါ font သွင်းပြီးဖြစ်သွားပါလိမ့်မည်။
( လက်ရှိ ဇော်ဂျီ UI ကေန font တွေအားလုံးက unicode default ဖြစ်သွားပါလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်
ဇော်ဂျီနှင့် နာမည်ပေးထားသည်များ ဖတ်လို့ရတော့မည် မဟုတ် )
၁။ Application မှ Font Book ကို ဖွင့်ပါ။
၂။ အလယ် column ၏ အောက်ဘက်မှာ ရှိတဲ့ + button လေးကို နှိပ်လိုက်ပါ။
၃။ Fonts folder ကိုသွားပီး masterpiece.ttf ကို ရွေးလိုက်ပြီး open လုပ်လိုက်လျှင် ရသွားပါမည်။
Myanmar Unicode လက်ကွက်မျိုးကွဲများလက်ရှိ လူသုံးများတဲ့ လက်ကွက် ၃ မျိုးရှိသည်။
၁။ NHM Keyboard ( ဇော်ဂျီ လက်ကွက်နှင့် ဆင်တူသည် ။ NHM ဖွင့်ထားလျှင် အဟောင်း ဇော်ဂျီ ကိုရိုက်မရပေ။ )
၂။ keymagic ( ဇော်ဂျီ လက်ကွက် အတိုင်းရိုက်က်လို့ရသည်။ ဇော်ဂျီလက်ကွက်ကိုလည်း ပြောင်းသုံးလို့ရသည် )၃။ အက္ခရာ ( မြန်မာစာ စာလုံးပေါင်း သတ်ပုံအတိုင်း ရိုက်ရသော လက်ကွက်ဖြစ်သည် )
NHM Keyboard (Windows Only)
NHM ကီး ဘုတ် ဟာ အရင် က ဝင်း လက် ကွက်၊ ဇော်ဂျီ လက် ကွက် များ နှင့် ရင်းနှီး ကျွမ်းဝင် သူ များ အတွက် ဖြစ် ပါတယ်။ ဒီ ကီး ဘုတ် လေး ဟာ ဇော်ဂျီ လက် ကွက် အသုံးပြု ပုံ နှင့် ဆင် တူ ပါ တယ်။ ပါဋ် ဆင့် တွေ ရိုက် တာ ကို လည်းဇော် ဂျီ
အတိုင်း Tilde ~ key ကို အသုံးပြုပြီး ရိုက် လို့ ရ ပါ တယ်။ NHM ကီး ဘုတ် ဆော့ဖ် ဝဲ ဟာ New Horizon Media ဆို တဲ့ ကုမ္ပဏီ က အခ မဲ့ ဖြန့် ဝေ တဲ့ ဆော့ဖ် ဝဲ ဖြစ် ပြီး ဒီ ကီး ဘုတ် ရဲ့ မြန်မာ လက် ကွက် ကို တော့ ကို ရာ ဗီ ကစည်းမျဉ်း ပေါင်း တစ် သိန်းကျော် ပါဝင် တဲ့ Keyboard File ကို ရေး ပေး ထား တာ ပါ။
၁။ Keyboards folder အောက်က NHM.zip ဖိုင်ကို copy ကူး ပြီး နှစ်သက်ရာ နေရာမှာ paste
၂။ အဲဒီဖိုင်ကို Double Click နှစ်ချက်ဖြင့် နှိပ်ဖွင့်ပြီး အထဲက Folder ကို ကိုယ်ထားချင်တဲ့နေရာပေါ်ကို Drag ဆွဲချပါ။ (Unzip လုပ်ပါ။)
၃။ NhmWriter.exe ကို ဖွင့်ပါ။ Taskbar ပေါ်မှာ ခေါင်းလောင်းပုံ အိုင်ကွန်လေး ပေါ်လာတာကို
၄။ စာစမ်းသပ်ရိုက်ထည့်ဖို့ Notepad ကို ဖွင့်ပါ။ Format>Font ထဲမှာ Myanmar3 ကို ပြောင်းပါ။
၅။ Alt+1 ကို နှိပ်ပါ။ ခေါင်းလောင်းပုံလေး ဝါသွားရင် မြန်မာလက်ကွက် ဖြစ်သွားပါပြီ။ Alt+1 ပြန်နှိပ်ရင်
၁။ တစ်ချောင်းတင်လုံးကြီးတင်၊ အသတ်အောက်ကမြစ်စတဲ့ စာလုံးစီပုံအမှားတွေကို အလိုလို ပြင်ပေးသွားပါတယ်။
၂။ ဥသတ်၊ သရရစ်၊ သေဝထိုးသရရစ်ရေးချေရှထိုး၊ စလုံးယပငင့် စတဲ့ မြန်မာစာမှာ မရှိတဲ့ စကားလုံးတွေကို
သက်ဆိုင်ရာ ဉေလးသတ်၊ အက္ခရာဩ၊ အက္ခရာဪ၊ ဈမျဉ်ဆွဲ စတာတွေကို အလိုလို ပြောင်းပေးပါတယ်။
၃။ လေးထောင့်ကွင်းအပိတ် "]" ကို အင်္ဂလိပ်အက္ခရာတစ်လုံး ရိုက်ချင်ရင် သုံးပါတယ်။ ဥပမာ
မြန်မာစာတွေရိုက်နေရင်းနဲ့ အင်္ဂလိပ်အက္ခရာတစ်လုံးတည်းဖြစ်တဲ့ "A" ကို `ရိုက်ချင်ရင် "]" ကို အရင်ရိုက်ပါ၊
ပြီးတော့ "A" ကိုရိုက်ပါ။
##သတိပြုရမှာကေတာ့ NHM သုံးနေတုန်းမှာ Ctrl+Shift စတဲ့ ဝင်းဒိုးထဲမှာ အင်စေတာလုပ်ထားတဲ့ကီးဘုတ်လက်ကွက်တွေအတွက် Shortcut ကို သုံးမရပါဘူး။
Keymagic (Windows, Mac, Linux)
Keymagic မသွင်းခင် မိမိ ရဲ့ Windows က 32 bits လား 64 bits လားဆိုတာကို
စစ်ဆေးဖို့အတွက် Start button ကို နှိပ်ပါ။ Control Panel > System and Maintenance >
System ကို click ပါ။ System အောက်မှ system type မှာ ကြည့်ပါ။
Keyboards folder အောက်က keymagic-32bit သို့မဟုတ် keymagic-64 bit ကိုသွင်းပြီး
Keyboards အောက်က KMZ.pkg ကို run ပြီး အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Ubuntu Linux အတွက်
terminal တွင် sudo apt-get install libibus-dev autopoint automake
sudo mkdir -p /usr/share/keymagic
mkdir -p ~/.keymagic
keyboards folder ထဲက ibus-keymagic-1.0.tar ကို Downloads folder ထဲ ထည့်လိုက်ပါ။
ပြီးလျှင် terminal မှာ
tar -xvf ibus-keymagic-1.0.tar
Keyboards အောက်က ibus folder ထဲတွင် km2 file များရှိသည်။ ထို file များမှ မိမိ နှစ်သက်ရာ
cp "~/Downloads/Zawgyi L - Unicode.km2" "~/.keymagic/Zawgyi L -
Keyboard ကို Activate လုပ်ခြင်း
iBus ကို restart ချပါ။ ( iBus icon ကို ှိပ်ပီး Restart ချလျှင် ရသည် )
iBus icon ကို နှိပ်ပါ။ Preferences ကို သွားပါ။
Input Methods tab ကို သွားပါ။
English-> ZawgyiUnicode ကို ရွေးပါ။
အက္ခရာ ( Windows )
အခြား ကီး ဘုတ် တစ် ခု ကေတာ့ အက္ခရာ ကီး ဘုတ် ဖြစ် ပါ တယ်။ အက္ခရာ ကီး ဘုတ် ကို တော့ Thanlwinsoft.org မှ ထုတ် ဝေ ပေး ထား တာ ဖြစ် ပြီး MyanmarNLP.org.mm မှာလည်း ဒေါင်း လုပ် ရ ယူ နိုင်ပါ တယ်။ ဒီ ကီး ဘုတ် လေး ကေတာ့ မြန်မာ စာလုံးပေါင်း သတ်ပုံ အတိုင်း ရိုက် ရ တာ ဖြစ် ပါ တယ်။
ဥပမာ- မ ရ ရစ် န ငယ် သတ် မ+ြ+န+် ဆို
တဲ့ သတ်ပုံ အတိုင်း ရိုက် ရ တာ ပါ။ မြန်မာ စာ လက် ကွက် ကို အခု မှ စတင် ရင်းနှီးကျွမ်းဝင် သူ များ ဆို ရင် တော့ ဒီ ကီး ဘုတ် လေး က ပိုမို လွယ်ကူ စေ ပါ လိမ့် မယ်။ အက္ခရာ keyboard ကို သွင်းရန် Windows 32 bits လား 64 bits လား သိရန် လိုအပ်ပါသည်။ Keyboards folder အောက်တွင် ရှိပြီး သွားရောက်သွင်းယူနိုင်သည်။
How to set your Browser ( mrdba.info)
လူတွေ အဓိက အသုံးများတဲ့ Major Browser ၂ခုဖြစ်တဲ့ IE and Fire Fox တွေမှာ မိမိစက်ထဲမှာ
ယူနီကုဒ်ဖောင့် မရှိပင် မရှိသော်ငြားလဲ ဖတ်လို့ရအောင် လုပ်ထားပါတယ်။ ကွန်မန့်ပေးသော အခါတွင်လည်း ဇော်ဂျီနှင့်သာရိုက်ထည့် www.mysteryzillion.org ပေါ်သာအခါ ယူနီကုဒ် အလိုလိုပြောင်းသွားအောင် လုပ်ထားပါတယ်။
ပထမဆုံး IE မှာ မြန်မာလို ဖတ်လို့ရအောင် setting လေးတွေ စစ်ကြည့်လိုက်ရေအာင်။
IE ရဲ့Tools -> Internet Options ကိုရွေးလိုက်ပါ။
အဲဒီကမှတဆင့် ပွင့်လာတဲ့ Dialogue Box ထဲကမှ General Tab အောက်က Accessbility Button ကိုနှိပ်ပေးပါ။ အောက်ကပုံမှာ အနီအဝိုင်းနဲ့ ပြထားပါတယ်။
နောက်တစ်ဆင့်ပေါ်လာတဲ့ နေရာမှာ Check Box ကေလးတွေ မြင်ရပါမယ်။
အဲဒီမြင်ရတဲ့ လေးထောင့် အကွက်ကေလးတွေထဲက Formatting ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အာက်က အကွက်သုံးခုထဲက Ignore font style specified on webpages ဆိုတဲ့နေရာမှာ အမှန်ခြစ်များ ဖြစ်နေခဲ့လျှင် အဲဒီအမှန်ခြစ်ကို ဖြုတ်ပေးပါ။ ပြီးရင်တော့ OK Button လေး နှိပ်ပေးဦးခင်ဗျ။
တစ်ချိန်ယူဆာတွေ ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့ ၂နှစ်သုံးနှစ်လောက်က ဇော်ဂျီဖောင့်ကို စက်ထဲ သွင်းဖူးကြလိမ့်မယ်။ အဲဒီအခါမယ်
အဲဒီအချိန်တုန်းက ဖောင့်သွင်းရင်းနဲ့ အိုင်အီးရဲ့ Settings ကို အလိုလို ပြင်သွားတာ ရှိဖူးပါတယ်။ အဲဒီလူမျိုး
အခုအချိန်ရှိနေသးရင် သူရဲ့ IE Browser မှာ အခုနေရာရောက်ရင် User Style sheet ဆိုတဲ့
ခေါင်းစဉ်အောက်မှာရှိတဲ့ လေးထောင့်ကွက်မှာပါ အမှန်ခြစ်ဖြစ်နေပြီးသား ဖြစ်နေမှာပါ။ အဲဒါဆိုရင်လည်း အဲဒီအမှတ်ခြစ်ကို ဖြုတ်ပေးဖို့လိုပါမယ်။ အဲဒီလိုဖြုတ်လိုက်ရင် အရင်က အိုင်အီးနဲ့ဖတ်နေလို့ရတဲ့ ဇော်ဂျီသုံးတဲ့
ဘလော့တွေ ဖတ်မရဖြစ်သွားမှာပေါ့ဆိုရင် ဟုတ်ပါတယ်။ သို့သော် မိတ်ဆွေအေနနဲ့ ဘာလုပ်လို့ရနိုင်သလဲဆိုရင် ဇော်ဂျီနောက်ဆုံးဗားရှင်းကို စက်ထဲ သွင်းလိုက်ပါ၊ ပြီးနောက် Mozilla Fire Fox နဲဖတ်ရင် ဇော်ဂျီသုံးသော
ဘလော့တွေကို ဆက်ဖတ်လို့ ရနေမှာပါ။ မင်းဘေလာ့ တစ်ခုဖတ်ဖိုအတွက် ငါ့ IE ကို မပြောင်းပေါင်ဆိုလည်း
ဟုတ်ကဲ့ မပြောင်းပါနဲ့ခင်ည။ သို့သော် Mozilla Fire Fox လေးတော့ စက်ထဲ သွင်းထားပေးပါ။ အဲသာဆိုရင် နောက်တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ Mozilla Fore Fox မှာ ဖတ်လို့ရအောင် လုပ်နည်းလေး ဆက်ဖတ်ကြည့်ပေးပါဦး။
မှတ်ချက်။ ။ IE တွင် ဖောင့်မရှိပဲ စာဖတ်၍ ရခြင်းမှာ ထိုဘေလာ့တွင် EOT Font သုံးထား၍ ဖြစ်ပါတယ်။
EOT font မသုံးထားလျှင် အထက်ပါ setting များ ပြောင်းသော်လည်း ဖတ်၍ရမည်မဟုတ်ပါ။
မ မြင်ဖူးသေးဘူး မသုံးဖူးသေးဘူး ဆိုသူများလဲ ပုံကြည့်နိုင်အောင် နမူနာပြရပါတယ်။ ဆိုတော့ စက်ထဲမှာ Mozilla Fire Fox ရှိပြီးသွားပြီး ဆိုကြပါတော့။ အဲဒါဆိုရင် Tools -> Options ကိုသွားပါ။
firefox အမြင့်တွေမှာဆိုရင် bookmark. histroy , download တို့ရဲ့အောက်မှာ တစ်ခါတည်းပါပါတယ်။
အဲဒီကနေပွင့်လာတဲ့ Dialogue Box ကေနမှ အောက်ကပုံမှာ ပြထားတဲ့အတိုင်း Content Tab ကိုသွားပါ။
Default Font မှာ Zawgyi-One လုပ်ထားရပါမယ်။ ဒါမှ ဇော်ဂျီနဲ့ရေးသော ဘလော့များကို
အေးအေးဆေးဆေး ဖတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုလုပ်ဖို့အတွက် ဘေးနားက Advanced button ကိုနှိပ်ပေးရပါမယ်။ နောက်ထပ်ပွင့်လာတဲ့ Dialogue Box မှာ အောက်ကပုံမှာ ပြထားတဲ့အတိုင်း အနီရောင် ဝိုင်းပြထားတဲ့ နေရာလေးမှာ လုပ်ထားတဲ့ အတိုင်း ပြောင်းထားလိုက်ရုံပါပဲ။
ဒီနေရာမှာ အရေးကြီးတာက အောက်နားလေးက Check Box လေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Allow pages to choose their own fonts, instead of my selections above ဆိုတာရယ် အောက်ဆုံးက
Default Character Encoding ကို Unicode (UTF-8) ဆိုတာလေး ရွေးထားလိုက်ဖို့ပါပဲ။
အဲဒီလိုလုပ်ပြီးရင်တော့ OK Button ကေလး နှိပ်လိုက်ပြီးရင် အားလုံးပြီးပါပြီ။
ဒါဆိုရင် သင့်စက်ထဲ ဇော်ဂျီဖောင့်ရော ယူနီကုဒ်ဖောင့်ပါ နှစ်မျိုးစလုံးရှိနေရင်တောင်မှ ဇော်ဂျီသုံးသော
ဘေလာ့များကို ဇော်ဂျီဖောင့်ဖြင့်ဖတ်နိုင်ပြီးတော့ ယူနီကုဒ်သုံးထားသော ဘေလာ့များကိုလဲ ယူနီကုဒ်အတိုင်း ဖတ်လို့ရနိုင်မယ်ဖြစ်ပါတယ်။ (မှတ်ချက်၊ ၊ Facebook တွင်တော့ ဖောင့်၂မျိူးလုံး သေသချာချာ မြင်ရမည်မဟုတ်ပါ။ default font လုပ်ထားသော ဇော်ဂျီများသာ မြင်ရပါမယ်။)
ဇော်ဂျီဖောင့်သုံး ဘေလာ့များကို မည်ကဲ့သို့ အဆင်ပြေပြေ ဖတ်နိုင်မည့်အကြောင်း စာဖတ်သူဖက်မှ ယခုကဲ့သို့ လုပ်လိုက်ခြင်းဖြင့် အဆင်ပြေသွားမှာဖြစ်ကြောင်း ပြောပြခြင်း ဖြစ်ရပါတယ်။
Font family မသုံးထားတဲ့ website များအတွက် bookmarketlet များကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
bookmarklet.saturngod.net ကို သွားပါ။
Zawgyi Force ကို မိမိ ရဲ့ bookmarket toolbar ကို drag & drop ဆွဲချပြီး ထည့်လိုက်ရုံပါပဲ။
ဇော်ဂျီနဲ့ ရေးထားတဲ့ site တွေကို မြမင်ရရင် Zawgyi Force ကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Unicode အတွက် Mac သမားတွေကေတာ့ masterpiece force ကို အသုံးပြုနိုင်ပြီး windows သမားတွေကို Yunghkio force ကို အသုံးပြုနိင်ပါတယ်။
ဒီလင့်လေးမှာလည်း သွားရောက် လေ့လာနိုင်ပါသေးတယ်။
နောက် ထပ် အလွယ်ဆုံးနည်းတစ်ခု ကိုထပ်ရှင်းပြပါဦးမည်။
Myanmar IT Development မှ ကို Who Am I ရဲ့ ပိုစ်ကို အတိုချုပ်ပြီးပြန်ဖော်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်။
Google Search မှာ Key Magic 1.3.2 or 1.4, or 1.5 ကိုရှာလိုက်ပါ။
အကယ်၍ မိမိစက်ဟာ ၆၄ ဘစ် ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ ၁.၄ သို့မဟုတ် ၁.၅ ကိုသုံးနိုင်ပါတယ်။
အဲဒိ ဗားရှင်း ၁.၄ နဲ့ အထက်ကို ၀င်းဒိုး ၆၄ ဘစ်မှာ အသုံးပြုဖို့ရန် လိုအပ်ချက်ကတော့ Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable Packageကို ဒေါင်းလုပ်လုပ်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ပထမဆုံး ကီးမက်ဂျစ်ကို ဒေါင်းလိုက်ပါ.
download Key Magic 1.5.1
ထို့နောက် ၀င်းဒိုး ၃၂ ဘစ်သမားများအတွက်
Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable Package ကို အောက်က လင့် ၂ခုစီမှ ဒေါင်းယူလိုက်ပါ။
၆၄ ဘစ်သမားများအနေနဲ့ကတော့ နောက်ထပ် တစ်ခု ထပ်ဒေါင်းရပါလိမ့်မယ်။
ဒါကိုဒေါင်းပြီး အင်စတော လုပ်ပါ။ http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&am...
အထက်ပါ အရာများကို ဒေါင်းလုပ်နဲ့ အင်စတော ပြီးမှသာလျှင် ကီးမက်ဂျစ်ကို ဒေါင်းလုပ်နဲ့ အင်စတောလုပ်ပါ။
စာရိုက်စနစ် စုစုပေါင်း ငါးမျိုးပါဝင်ပါတယ်။
အသေးစိတ်ကို KeyMagic Developer ကိုသန့်သက်ခင်ဇော်ရဲ့ blog မှာ ဆက်လက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
ဖောင့်အင်စတောအတွက် microsoft Visual C ++ တို့ ကီးမက်ဂျစ်တို့ကို ဒေါင်းလုပ်ပီးလို့ ကီးမက်ဂျစ်ကို အင်စတောလုပ်ပီးသောအခါ ကွန်ပျူတာရဲ့ desktop ပေါ်မှာ ကီးမက်ဂျစ် အိုင်ကွန်လေး တင်ထားလိုက်ပါ။ စက်ဖွင့်ပြီးသော် အဲဒိ ကီးမက်ဂျစ်အိုင်ကွန်လေးကိုနှစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ။ ကွန်ပျူတာရဲ့ ညာဘက် ဘောက်နားမယ် keymagic ဆိုတာလေးပေါ်နေမယ်. .အဲဒါကို နှီပ်ပြီး မိမိအလိုရှိရာဖောင့်ကိုေ၇ွးယူအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော့်စက်က ၀င်းဒိုး ၆၄ ဘစ်.. 'key magic ကို ကျွန်တော် ၁.၅ သုံးတာ အဆင်မပြောလုိ့ ၁.၃.၂ ကိုသုံးလိုက်တာ အခု အဆင်ပြေနေတယ်ခင်ဗျ.
Posted by Ko Thant